Sidee loo dubaa duck?
Najaxda habboon ee la dubay waxay u egtahay mid qurux badan oo hodan ah miiska xaflad kasta. Laakiin, si aad u jilicsan, laakiin sidoo kale si daacadnimo leh, waxaad u baahan tahay inaad ogtahay murugadaas oo kale: iyo sidoo kale waxa ugu muhiimsan, intee in badan oo aad dubi kareyso najaax dhan foornada. Waxaas oo dhan waxaad baran kartaa, haddii aad karisid shimbirkan cajiibka ah sida waafaqsan cuntada.
Duck la dubay oo la shiilay iyada oo tufaaxa
duck - 1 karbaash;
tufaax (oo la cunayo) - 4-5 gogo ';
malab dareere ah - 70 ml;
xawaashka digaagga digaaga - 1 tbsp. qaaddo.
Maqaarka daajisku wuxuu noqon doonaa mid aad u adag oo jilciya haddii la oofsado dabka furan ee gaas gubanaya. Taas ka dib, waxaan si fiican ugu dhaqnaa biyo qabow oo si qasab ah uga qalaji dhammaan dhinacyada. Waxaan u xoojineynaa si ay u dhadhanaan cusbo. Iska yaree liin fareemka ah kala badh ka dibna tuuji juuska saxanka. Weelka isku midka ah waxaan ku darnaa malabka dareeraha ah iyo caawinta qashinka shaaha oo dhan walaaqaya. Qaar ka mid ah miisaanka oo ah isku dar ah, waxaan ka tagnaa, iyo inta hartay oo dhan waa fiican, meelo kasta oo la heli karo, waxaanu daboolnaa naangeyaga. Sidoo kale si taxadar leh u xoqin raashin gaar ah loogu talagalay suxuunta laga sameeyey digaagga.
Si khafiif ah u gooyey tufaaxa aan loo baahnayn nadiifinta maqaarka, ka gooyey laba lakabana ka saar mindi ka mid ah cotyledons. Ka dibna iyaga u gooyaa qaabdhismeedka aan lahayn qaro aad u qoto dheer lehna ku rusheeya iyaga oo isku dar ah malab iyo liin. Waxaan dhajinay tufaax ku jirta bakhtigu ilaa ay ka istaagto, tago oo kaliya meel bannaan oo ay u dhajiso nuucda. Isla markiiba kaddib waxaan kudajirnaa shimbirta qashinka lagu qiyaaso, laakiin si taxadar leh u samee, ka dibna ku dheji dubista dubista, ka dibna la dhigo oo la dhigo. Ka hor inta aan la xirin shooladda, wali waxaan dabooli karnaa nuucyada kala duwan ee tufaaxa. Waxaanu u dirnaa wax kasta oo foornada kulul ilaa 195 darajo, kadib 1 saac iyo 45 daqiiqo ka dib ayaannu soo saarnaa, jebinta weelka oo ugu yaraan 15 daqiiqo ayaannu gelinaa shimbirta shimbirta.
Nooc oo bajooga, dubi foornada
Baqashda digaagga - 1 koob;
Suugo soy ah loo cuskaday - 40 ml;
majones- dufan - 60 ml;
kalluunka dalooshada la kariyey - 1,5-2 st.
Saliid gabbaldayaha - 1.5 tbsp. qaadooyin.
Diyaarso nuugista si aad u karisid. Marka xigta, aad u wanaagsan (fara badan) waxay ku faafinayaan shimbirta shimbirta ah ee la mariyo suugo soy ah, dhammaan meelaha la heli karo. Waxaan u dhigeynaa qiyaastii 60 daqiiqo. Ka dib, isku mid ah waxaan ku dhejin karnaa (dhuxusha) majones subag. Xawaashka horay loo xoqay ee bakeeriga ah si adag u dhig dhurubka duck iyo ku rid foomka si fiican u saliidda saliid gabbaldayaha. Ku dhaji cidhifyada cirifka, oo lagu qiyaaso qiyaasta qaabka xaashida bireed.
Waxaan ku dhejin karnaa saxanka xarigga ilaa 200 darajo heerkulka foornada iyo sabir u sugaan 1.5 saacadood. Ka dib si taxadar leh uga saaro foornada iyo ha cajiinka caleenta si aad u qabatid, qolof dahab ah 12-15 daqiiqo oo kale. U adeegso saxanka dhameystiran barkinta cagaarka iyo maraqyada tufaaxa cusub.
Hadda, isagoo og in sida si habboon iyo dhadhan fiican leh dubi duco aad martidaada ku faraxsanahay!
Bali laga bilaabo qalabka guriga lagu kariyo ee guryaha
Salad Cuntada «Duco leh cananaaska» - calsan
Hilib digaag ah oo leh qaansiir
Feeriyada doofaarka loogu talagalay barbecue
Salad leh cagaarsho - cuntada ugu fiican ee cunto fudud qabow
Salad loogu talagalay cunto
Grenki - cuntada ugu fiican ee cunto fudud
Adjika delicious ka yaanyo yaanyo xilliga jiilaalka
Zucchini leh hilibka duqadda - cuntada ugu fiican ee suxuunta asalka ah maalin kasta
Sidee loo sameeyaa markab ka baxsan kulamada?
Qalitaanka ilmo galeenka ee darajada 2aad
Horumarinta ilmo-galeenka ee fasalka todobaadkiiba
Dhirta hooyada iyo aabaha
Goobaha dhulka oo leh gacmahooda
Claire Holt oo ah Vampire Diaries ayaa mar kale guursatay
Okroshka on yogurt - wax lagu qoro miisaanka
Iyada oo la xidho dharka moofa-furaha ah?
Saliidaha quruxda badan
Boeing 737 500 - qaabeynta gudaha
Dufanka oo dhan sanka ku dhaca carruurta - daawo qorista
20 Sababta Sababta Maxaad Uga Jirto Culayska
Kansarka mindhicirka yar - calaamadaha
Midabada quruxda badan - xagaaga 2016
Salad hilib oo leh jiis
Antibiyootiko loogu talagalay otis
Dharka dhallinyarada ee dharka
Waa maxay sababta riyadu u duulayso diyaarad?
Cuntada Satsivi ee digaag
Sidee loo dhejiyaa daahyada sariirta ee geesaha?
Boorash Bisada leh bocorka ah ee isku dhafan
Tincture ee basbaaska biyaha ka dib dhalmada